Ngokuba izakhamuzi zamakhukhunathi ethu zizithelo ezingavamile nezithakazelisayo. Bambalwa abantu, ngemva kokubuka isikhangiso esihle noma ifilimu mayelana nokuphila esiqhingini, abazange bacabange ngalokho ukunambitheka kakhukhunathi.
Abanye, banelisa isifiso sabo, bathengise "bounty". Kodwa uma ibha eyaziwayo ithengiswa ngaso sonke isinyathelo, khona-ke lapho ungathola khona ubisi lwekakhukhunathi nokuthi ungubani - kuwumkhiqizo wemvelo
Eqinisweni, ubisi lwekakhukhunathi lubuye lithengiswe, kodwa kuphela ezitolo ezinkulu. Kodwa iqiniso liwukuthi iphakethe elivamile le-tetra kanye ne-candy ejwayelekile ibulala yonke into enhle yesikhashana. Ngakho-ke, usuku luyeza lapho umuntu enquma ukuthenga izithelo ezithandekayo. Ngenisa ngenjabulo ekhaya futhi ... uyaqonda ukuthi akanalo indlela yokuvula ukakhukhunathi.
Esikhathini kukhona zonke izinto eziseduze. I-walnut engenabuhlungu (i-drupe eyomile, ukuze iqondwe kahle) ifakwe ngesibhamu, i-sawed nge-hacksaw, iphonswe phansi ekhonkment nge-swing , eboshwe ngesando. Imikhonto, izinhlayiya, isiselisi, isiselisi, izipikili, izibukovu, izikhali - konke kusebenza. Kwenzeka ukuthi ukakhukhunathi ongekho emthethweni awukwazi ukuvulwa, noma umphumela womzamo uhlakazeka kuzo zonke izingcezu zekhanda zekhanda, omakhelwane abathukuthele nejusi elifafaziwe. Isifiso sokuxhumana nalesi sithelo silahlekile kuze kube phakade.
Ukuvimbela lokhu kungenzeki, ake sibheke izindlela ezilula zokufinyelela kumatpu omnandi.
Ukususwa kwamanzi kakhukhunathi
Yebo, ngamanzi kakhukhunathi, hhayi ubisi. Ubisi luwumkhiqizo wokufakelwa, owenziwe ngamaspipu namanzi.
Noma iyiphi indlela echaza indlela yokuvula ukakhukhunathi njalo iqala ngokuthululwa kwamanzi kakhukhunathi. Uma kungenjalo, uma ivuliwe, iqhuma, futhi ngeke ukwazi ukuyizama. Nokho, uma i-nut isemdala kakhulu, kungenzeka ukuthi ayikho. Kodwa ukakhukhunathi onjalo akufaneleki ukudla nhlobo, ngoba ukungabi khona kwamanzi ngaphakathi kusho ukuthi akusizi lutho.
Ngakho-ke, geza ukakhukhunathi bese uthola izindawo ezintathu ezimnyama kuso. Kubalulekile ukwenza izimbobo ezimbili zazo. Lezi yizindawo ezikhungethwe kakhulu, kodwa noma kunjalo akulula ukuzihlaba, ngakho-ke qaphela, ungazilimazi! Elinye lamabala, ngendlela, lilula kunezinye, kodwa kusengcono kakhulu ukubhoboza amabili, ukuze ijusi ligeleza ngokushesha.
Ungasebenzisa ummese, i-nail enkulu nesando, isikhwama sezinkuni, ezimweni ezimbi kakhulu, umshini wokugqoka. Ngemva kokwenza umgodi, vula izithelo bese uthele uketshezi esibukweni. Noma ungafaka utshani uphuze amanzi ngokuqondile kukhonta.
Manje, lapho sesilahlile izithelo zethu 'zokuswakama okuphilisa', sizokwazi ukuvula ukakhukhunathi.
Inombolo ye-Method 1
Iphume kakhulu kakhulu. Thatha ummese omuhle, ulinganisa cishe u-1/3 walowo ohlangothini lwekakhukhunathi lapho "amehlo" ekhona, futhi uhlukanise le ngxenye ngomugqa wokucabanga. Ukubamba ikhukhunathi ngakolunye uhlangothi, uthinte ngalolu hlangothi ngommese, kancane kancane uphendule ukakhukhunathi eduze kwe-axis yayo. Ngokushesha igobolondo lizoqhekeka. Uma ingasuswa masinyane, yenza nje okunye ukunyakaza kokunyakaza futhi ususe ngokucophelela igobolondo.
Faka isicelo kuphela uma uqiniseka ngokusebenzisana kwakho! Ungabeka i-coconut ebhodini lokuchofoza. Esikhundleni sommese, ungazama ukunyakaza.
Inombolo ye-Method 2
Uzodinga ummese, isando kanye nebhodi lokusika. Beka isithelo ebhodini, uphinde ulinganise i-1/3, njengendlela yangaphambilini, unamathisele emgqeni ocabangelayo umsi wommese omkhulu ohlala njalo uphinde uwuthathe ngesando. Kufanele ibonakale iphuka. Phinda inqubo ngokushintshanisa ikhukhunathi kumbuthano.
Kwakukhona ama-halves amabili athile (umuntu othile akahle kakhulu, kodwa konke kuza nesipiliyoni). Manje susa inyama. Njengomthetho, kuqinile kakhulu ngokumelene negobolondo, ngakho-ke kufanele uyiphakamise ngomese noma i-spoon. Ukuze wenze lula le nqubo, faka i-nut eqoshiwe esiqandisini ngehora noma amabili.
Inombolo yesistimu 3
Uzodinga ithawula (isikhwama, ifilimu ye-plastic) nesando.
Gcoba nut ngethawula noma iphakethe, qala ukulishaya ngesando kumbuthano, ukushaya phakathi (endaweni evulekile). Uma ingasebenzi, zama ukuze "unciphise kahle" ikhukhunathi ngesando, isitini noma enye into esindayo. Kodwa kulokhu kungcono ukwenza lokhu phansi, mhlawumbe ukhonkolo. Kodwa ungalindeli ukuthi izingxenye ezimbili ezilinganayo zizovela, njengokukhangisa. Kodwa-ke, konke okufanayo ekusetshenzisweni kakhukhunathi kuyodingeka ukugaya, ngakho ungathukutheli.
Lezi yizincazelo ezidume kakhulu futhi ezilula zendlela yokuvula ikakhukhunathi. Yiqiniso, udinga ikhono elincane. Kodwa, ngemva kokuzama izikhathi ezimbalwa, uzobona ukuthi kulula.
Ezikabani ukumaka ezimnyama? Umlando ifulege omnyama abomvu